💫 IiHolide eziqatywa lilanga Goa- Igolide 💫 - I-Airbnb
💫 IiHolide eziqatywa lilanga Goa- Igolide 💫
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguJulie
Le duplex yoxolo, iplani evulekileyo yesitudiyo ibekwe kwindawo engaphantsi kwemizuzu elishumi kude nesikhululo seenqwelomoya saseDabolim, kwindawo entsha kraca kunye nephezulu enembono entle kunye nezixhobo ezingcono. Izibane ezijikelezayo ukusuka kumphakamo ophindwe kabini kumgangatho ukuya-kwifestile yeefestile ezijonge echibini zenza ukubamba okusekhaya kwipenthouse evuthuzayo, ekumele ukuba uzive uhlaziyekile kwaye uhlaziyekile.
Ukungena kwisitudiyo se-duplex esicwangcisiweyo esicwangcisiweyo selanga, uya kuzifumana woyiswe yimvakalelo yokuzola. Le ndlu ineplani yomgangatho ovuleke ngokupheleleyo, inika imvakalelo yothando iyonke, ihlanjwe kukukhanya kwelanga okubugolide okuphuma ngaphakathi ukusuka kumgangatho ukuya kwisilingi seefestile, ezivuleleke kwibalcony ejonge kwiphuli yeOlimpiki emithandathu, eyakwenza ukuba ufune ukuqhuba. kanye ngaphakathi!
Inqanaba lokuqala, elifunyenwe ukusuka kumgangatho we-8 linendawo yokuhlala enebhedi ekhululekile ye-sofa-cum, ithelevishini kunye netafile yekhofi, ikhitshi yeplani evulekileyo exhotyiswe ngesitofu se-induction, i-microwave, ifriji, inkqubo yokucoca amanzi e-RO, i-crockery kunye ne-cutlery. Kukho kwakhona igumbi lomgubo kweli nqanaba.
Ukunyuka kwezinyuko kuya kukusa kwigumbi lokulala elinebhedi egudileyo egutyungelwe yi-duvet, kunye nesicwangciso esivulekileyo, esijonge indawo yokuhlala engaphantsi kunye nedama elingaphaya. Njengelinye lenqanaba lokuqala, eli gumbi lokuhlambela ligcweleyo nalo, licocekile ngokungenabala, likhanyise kakuhle kwaye langoku.
Ukuba unengxaki yokukhwela izinyuko, musa ukoyika! I-Apartment inokungena kuyo yomibini iminyango ye-8 yenqanaba lokuqala, okanye unokuthatha ilifti uye kwinqanaba elilandelayo kwaye ungene ngqo kwigumbi lokulala, ukuba ukhetha! Indawo yangaphandle ineerempu zesitulo esinamavili, nazo.
Indawo yokulala inomnyango wabucala / wokuphuma, ovula kumgangatho we-9 womgangatho wophahla; nesithuba esaneleyo sokuhlala phandle kunye nokunethezeka kwimbono yepanoramic yoMlambo iZuari, ngelixa usela isiselo osikhethileyo okanye ukonwabela ikhandlela lothando elikhanyiswe kwisidlo sangokuhlwa phantsi kweenkwenkwezi! Uphahla lwendlu lukwaqhayisa ngedama elingapheliyo, elisetyenziselwa kuphela abahlali bale nqaba, ekuvumela ukuba ube namava elanga legolide ukutshona phezu komlambo ngelixa ubumnandi kwidiphu yangokuhlwa.
Iintsuku eziyi-7 e Dabolim
4.61 · Izimvo eziyi-18
Sun- kissed Holidays- Gold yeyona igqwesileyo zombini zehlabathi; ibekwe phakathi kolona luntu lukumgangatho ophezulu kunye noluntu lwasezidolophini, kwindawo enoxolo ejongene nohlaza oluchumileyo kunye nomlambo ongaphesheya. Ibekwe embindini weGoa. Oku kuya kukunika ufikelelo olulula ukuya eMantla naseMazantsi eGoa kunye nendawo yokubuyela ekhaya ngokukhawuleza nje ukuba usihla kwinqwelomoya yakho, uqinisekise ukuba akukho ndlela yokuba ungaphoswa yinqwelomoya yakho ngenxa yokuxinana kwezithuthi). Ikuluntu olunamasango anokhuseleko oluyi-24x7 kunye nokufikelela lula kwiivenkile, iikhemesti, iivenkile ezinkulu, iivenkile zewayini kunye nezibhedlele.
Ibekwe ngobuchule kumbindi weGoa, ngokulinganayo ukusuka eMantla naseMazantsi eGoa kukuvulela amava ahlukeneyo, ngokweminqweno kunye nezinto ozikhethayo.
Ngelixa ikwilali yaseGoan, le villa ikumgama nje wemizuzu elishumi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDabolim, iikhilomitha ezi-6 ukusuka kunxweme oludumileyo lwaseBogmalo apho unokuphumla khona, uphumle kwaye utye kuwo nawaphi na amatyotyombe aselwandle afana neJohns, UClaudies, kunye neeJoets ezikwanomculo odlalayo kunye neHollant Beach eyaziwa kancinci.
Sihlala imizuzu embalwa kude kwaye sizenze sifumaneke ukuze sijonge iimfuno zeendwendwe zethu, nokuba yiyure. Ndiza kuzama ukuba khona ngexesha lokungena kwaye ndijonge kwaye ndifowuna nje kude. Abasebenzi bam bayafumaneka nabo, ukuba ufuna uncedo lwabo.
Sihlala imizuzu embalwa kude kwaye sizenze sifumaneke ukuze sijonge iimfuno zeendwendwe zethu, nokuba yiyure. Ndiza kuzama ukuba khona ngexesha lokungena kwaye ndijonge kwaye ndifo…
Iilwimi: English, हिन्दी, Português
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 13:00 - 02:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dabolim